Griezmann oo fariin digniin ah u diray Cristiano iyo saaxiibadiis Juventus, kahor kulanka labada kooxood ee Champions League – Gool FM
Griezmann oo fariin digniin ah u diray Cristiano iyo saaxiibadiis Juventus, kahor kulanka labada kooxood ee Champions League
(Atletico) 18 Feb 2019. Antoine Griezmann ayaa farriin digniin ah u diray Juventus ka hor kulanka lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League ay labada kooxood ku wada ciyaari doonaan isbuucan.
Labada kooxood Atletico Madrid iyo Juventus ayaa ku wada ciyaari doona garoonka Wanda Metropolitano kulanka lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League, habeenka Arbacada ee soo aadan.
Yeelkadeed, Antoine Griezmann ayaa kahor ciyaartan wareysi uu bixiyay kahor kulankan wuxuu farriin digniin ah u diray kooxda Juventus:
“Waxaan heysanaa ciyaartoy kasoo ciyaartay finalkii Champions League, iyo Koobka Aduunka, waxaan heysanaa khibrad aad u weyn”.
“Dadka qaar ayaa waxay aaminsanyihiin in aan weli nahay koox yar, lakiin waxa ay u muuqataa inay qaldan yihiin, sababtoo ah waxaan noqonay koox si bahalnimo ah ugu tartameysa dhamaan tartamada, waxaan heysanaa ciyaartoy badan ee ku wanaagsan qeybo kala duwan”.
“Waxaan ka mid ahay nidaamkan weyn, waxaan si buuxda isugu diyaarineynaa ciyaartan si walba ay kooxda u awood badan tahay, waa inaan guuleysanaa, waxaan sameyn doonaa wax walba si aan guul u gaarno”.
Imisa Milyan oo taageere ayaa ku soo biiray kooxda Juventus tan iyo markii uu Ronaldo yimid? (daraasad la sameeyay)
“Messi waa waayo-araga kaliya ee caalamka kubadda cagta” - Fabio Capello